ရောဘတ် ကွက် - ဝီကီပီးဒီးယား
(1923-10-06) ၆ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၂၃ (အသက် ၉၆)
Chairman, Shangri-La Hotels and Resorts
US$11.6 billion (June 2015)
ရောဘတ် ကွက် Robert Kuok Hock Nien (မွေးနေ. ၁၉၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် J.B., Johor) သည် ဩဇာညောင်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ Forbes ၏ပြောဆိုချက်အရ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သူ၏ ခန့်မှန်း အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း တစ်သောင်း ပိုင်ဆိုင်ရာ အရှေ့တောင်အာရှ တွင် အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်သည်။ သူသည် အရှက်အကြောက်ကြီးသူဖြစ်ပြီး အပြောအဆိုလိမ္မာသိုသိပ်သည်၊ သူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုကို သူ နုင့် သူ၏မိသားစု မှ သီးခြားပိုင်ဆိုင်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ များစွာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှားမှအပ အာရှ တစ်ဝှမ်းအနှံ့အပြား တွင် သူပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားရှိသည်။
သူ၏ စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားမှု များထဲ တွင် ကြံခင်းခြံများ (Perlis Plantations Bhd)၊ သကြားချက်စက်ရုံများ၊ ဂျုံစေ့ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ ရေနံ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ဟိုတယ်များ၊ အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှု၊ သယ်ယူပို.ဆောင်ရေး၊ နှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ ဂုဏ်ဩဇာရှိ Raffles Institution မှာ ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ်ရာစု အစပိုင်းတွင် Kuok အဖေ သည် တရုတ်ပြည် China ဖူဂျီးရန်းမြို့ Fujian မှ မလေးရာ Malaya သို့ရောက်လာပြီး ဂျိုဟို ဘာရူ Johor Bahru တွင် ညီအကို ၃ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံး ရောဘတ် Robert ကို ၁၉၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် စီးပွားရေးနယ်ပယ်သို့ ရုံးအလုပ်သမားအဖြစ်စခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ နောင်တွင် ဆွေမျိုးများ ထောက့်ပံ့မှုဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုစခဲ့သည်။ ဘွဲ.ရ ပြီးသည်နှင့် ဂျပန်စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစု မစ်စူဘီရှီ Japanese Industrial Conglomerate Mitsubishi ၏ ကောက်ပဲသီးနှံဌာန တွင် ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၅ အတွင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ကွက်၏အကိုကြီး Kuok Senior ၁၉၄၈ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၄၉ တွင် ကွက် နှင့် ညီအကိုနှစ်ယောက် သည် စိုက်ပျိုးရေးသုံးကုန်များ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း Kuok Brothers Sdn Bhd ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်း အစိုးရအသစ် တက်ပြီးနောက် ကွက် သည် သကြားစီးပွားရေး ကို အစိုးရ နှင့် ပူးတွဲစခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ တွင် ဈေးနှုန်းများမတက်ခင် အိန္ဒိယ မှ သကြားကို ပေါပေါဝယ်ခဲ့ပြီးရောင်းဝယ်ခဲ့ရာ လျှပ်တစ်ပြက် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ သကြားချက်စက်ရုံများတွင် အလွန်ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံများ ဆက်လုပ်ခဲ့ ပြီး ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၀% နှင့် ညီမျှသော တန် ၁.၅ သန်း ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် မလေးရှား သကြားဈေးကွက် ၏ ၈၀% ကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ရာ အမည် ပြောင် “ အာရှသကြားဘုရင် ” ဟုတွင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၁ တွင် စင်ကပူနိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံး ရှန်ဂရီလား ဟိုတယ် Shangri-La Hotel ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ ပထမဆုံး ဟောင်ကောင်း အိမ်၊ခြံ၊မြေ။ဈေးကွက် သို့ ၁၉၇၇ ခုနှစ် တွင်ဝင်ခဲ့ပြီး အသစ်မြေရာဖော်ထုတ်သော အရှေ့ စင်ရှာစူးကမ်းနားပိုင်း Tsim Sha Tsui East waterfront တွင်မြေကွက် တစ်ကွက် ဝယ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ဟိုတယ် Kowloon Shangri-La ကိုဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ တွင် သူ၏ ကဲရီအဖွဲ. Kerry Group သည် Murdoch’s News Corporation ၏ South China Morning Post ရဲ့ ၃၄.၉% ရယူခဲ့သည်။ သူ.ကုမ္ပဏီ များသည် စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ယိုးဒယား၊ တရုတ်ပြည်မကြီး၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖီ၈ျီ၊ နှင့် ဩစတြလျ စသော နိုင်ငံ အများအပြားတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများထားရှိသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် Coca Cola အတွက် အချိုရည်ဖြည့်ထုပ်ပိုး bottling ကုမ္ပဏီ ၁၀ခု နှင့် ဘေဂျင်း ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်မှု စင်တာ Beijing World Trade Centre တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
သယ်ယူပို.ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအနက် Malaysian Bulk Carriers Berhad and Transmile Group များကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ CITIC Pacific တွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအနည်းငယ်ရှိခြင်းနှင့် ဟောင်ကောင် အား အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ သို့ပြောင်းရွှေ့မည့်ကာလတွင် သူသည် ဟောင်ကောင်၏ အနာဂတ် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး အဖြစ်ရွှေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းက သူ၏ နိုင်ငံရေးတွင် ဩဇာ အရှိန်အဝါရှိမှု ကိုသက်သေပြခဲ့သည်၊ ကွက် သည် အိမ်ထောင်၂ခါပြုခဲ့ပြီး ကလေး ၈ ယောက် ရှိသည်။ သူသည် ၁၉၉၃ ဧပြီလ ၁ ရက် နေ. တွင် ကဲရီအဖွဲ. Kerry Group မှ တရားဝင် အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ယခုအခါ သားတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Kuok Khoon Ean သည် သူ ၏ နေ့စဉ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများစုကို ကိုင်တွယ်နေသည်။ သူသည်လက်ရှိ ဟောင်ကောင် Hong Kong တွင်နေထိုင်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ တွင် Robert Kouk ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲ PPB Group (သကြားလုပ်ငန်းအုပ်စုများ အပါဝင် ကြံပင်စိုက်ခင်းမြေများ) ကို Felda သို့ RM 1.29 billion ဖြင့် ရောင်းချရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Bursa Malaysia သို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့သည်။
သကြားလုပ်ငန်းနှင့် ကြံပင်စိုက်ခင်းများသည် ကောက်ပဲသီးနှံနှင့် တိရိစ္ဆာန်အစားအစာများလုပ်ငန်းတွင် ရောင်းအားတက်စေသော ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုလုပ်ငန်းကို ရောင်းချခဲ့ခြင်းက သူ့ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိခဲ့စေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Robert Kuok - Forbes။ Forbes (9 March 2011)။3January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရောဘတ်_ကွက်&oldid=419240" မှ ရယူရန်